बीमा समितिका ५० वर्ष : बीमा क्षेत्रलाई फर्केर हेर्दा | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) बीमा समितिका ५० वर्ष : बीमा क्षेत्रलाई फर्केर हेर्दा
वित्तीय विवरणको ढाँचालाई सफलतापूर्वक लागू गर्‍यौं
पूर्व, अध्यक्ष, बीमा समिति
म विसं. २०६४ मा समितिको अध्यक्ष हुँदा कम्पनीको वित्तीय विवरणको ढाँचामा एकरूपता हुँदैनथ्यो । त्यसबेला कम्पनीहरूले आफ्नै तरीकाले वित्तीय विवरण बनाउने गरेका थिए । पछि हामीले धेरै मेहनत गरेर वित्तीय विवरणको उपयुक्त ढाँचा तयार गरेका थियौं ।
त्यसपछि लगानीकर्ताले बीमाक्षेत्रलाई एउटा विश्वसनीय क्षेत्रको रूपमा लिन थालेका हुन् । त्यतिबेला बीमाक्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती थियो ।
बीचमा बोर्डका सदस्य तथा कम्पनीका पदाधिकारीको समझदारीमा यस्तो ढाँचा बनाउने अधिकार समितिलाई छैन भन्ने कुरा पनि आयो । यही विषयमा आन्दोलनसमेत भएको इतिहास छ । तर हामीले यस्तो ढाँचा लागू गरेर नै छाड्यौं । हालसम्म सोही ढाँचाअनुसार कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण बनाउँदै आएका छन् ।
१८ घण्टासम्म काम गरेर बीमा समितिलाई उठायौं
पहिलो कार्यकारी निर्देशक, बीमा समिति
म विसं. २०३६ मा बीमा समितिमा प्रवेश गरेको हुँ । अर्थ मन्त्रालयको दुई कोठामा हामी तीन कर्मचारी काम गर्थ्यौं । त्यसबेला सीमित संख्याका कम्पनीलाई नियमन गर्ने र अभिकर्ताको इजाजतपत्र जारी गर्ने हाम्रो मुख्य काम थियो ।
तर बीमाक्षेत्रले सोचेअनुरूप प्रगति गर्न सकेन, जसकारण २०४६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बीमा समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमा गाभ्ने प्रयास गरे । त्यसबेला समितिलाई राष्ट्र बैंकमा गाभ्नु हुँदैन भनेर सरकारसँग ठूलो छलफल भयो । त्यसपछि समितिलाई राष्ट्र बैंकमा गाभिनबाट जोगायौं ।
त्यसबेला हामीसँग बीमाक्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त पूर्वाधार थिएन । बीमालेखका ढाँचा पनि थिएनन् । शुरूका वर्षहरूमा १८ घण्टासम्म काम गरेर पूर्वाधार विकास गर्ने, बीमालेखको ढाँचा तयार गर्नेे काम गरेका थियौं ।
पहिले तत्कालीन श्री ५ सरकारको नियमनमा बस्नुपर्दा समितिलाई त्यति अधिकार पनि थिएन । विसं. २०४७ प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि हामीले बीमा ऐन २०४९ लागू गरेर बीमा समितिलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा खडा गर्न सफल भयौं । बीमा ऐन ल्याउन पनि हामीले धेरै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्‍यो ।